Ronaldo oo ka hadlay bar-tilmaameeka xiga ee kooxda Juventus kadib markii ay ku guuleysteen Italian Super Cup – Gool FM
(Juventus) 17 Jan 2019. Cristiano Ronaldo ayaa ku hogaamiyay kooxdiisa Juventus in ay ku guuleysato koobkeedii ugu horeeyay ee xili ciyaareedkan, kadib markii ay AC Milan kaga guuleysteen finalka koobka Italian Super Cup.
Ronaldo ayaa kadib guushan weyn uu la gaaray kooxdiisa Juventus wuxuu tilmaamay sida uu ugu faraxsan yahay in uu ku faraxsan yahay in koobkeedii ugu horeeyay uu la qaado kooxda reer Talyaani.
Dhinaca kale xidiga reer Portugal ayaa tilmaamay baahida loo qabo in ay ka shaqeeyaan sida ay ugu guuleysan lahaayeen bartilmaameedkooda xiga ee xili ciyaareedkan ee ah tartanka UEFA Champions League.
Cristiano ayaa wareysi uu ku bixiyay “Rai Sport” wuxuu kaga hadlay guushii ay xalay ka gaareen kooxda AC Milan wuxuuna yiri:
“Waxaan u ciyaarnay si wanaagsan, waxaana abuuray fursado badan, waana hubaa inaan ku faraxsanahay sababtoo ah waxaan dhaliyey goolka guusha”.
“Waan ku faraxsanahay, goolkaygeyga ugu horeeyay ee 2019, wuxuu ahaa koobkan keygii ugu horeeyay aan kula guuleystay kooxda Juventus.taasina waa wax dhacay, waan ku faraxsanahay”.
“Tani kaliya waa bilaw, waxaan ku guuleysanay koob, balse hadda waa inaan si joogto ah uga shaqeynaa, sida aan ugu guuleysan lahayn bar-tilmaameedkeena xiga”.
“UEFA Champions League markasta waa mid ka mid ah bar-tilmaameedyada ugu xoogan ee kooxda Juventus xilli ciyaareed kasta, sidaas darteed waa inaan si xoogan kaga shaqeynaa sida aan makan ugu guuleysan lahayn”.
Muxuu uga dhigan yahay Juventus koobkii Super Cup oo ay Xalay ka qaaday AC Milan??